Ny ray aman-dreny tsirairay dia miahy ny fahasalaman'ny zanany. Miezaka manome ny tsara indrindra amin'ny zanatsika izahay ary miaro azy ireo amin'ny aretina. Ary raha mbola marary ilay zaza, dia maniry ny hanasitrana azy haingana araka izay azo atao. Mba hanampiana antsika amin'ity fampanantenana ity, na aiza na aiza dia misy dokambarotra dokambarotra - arbidol. Na dia eo amin'ny sofin'ny rehetra aza ny anarana, tsy ny rehetra no mahafantatra ny fitsipiky ny zava-mahadomelina sy ny dosage. Noho izany dia andeha isika hamaha izany ary hahafantarana amin'ny farany hoe inona izany ary inona no fihinanana azy.
Arbidol dia fanafody antiviraly ao an-tokantrano natao hiadiana amin'ireo aretina virosy virosy, anisan'izany ireo voan'ny gripa grippe. Izy io dia novokarina ho toy ny kapsula ho an'ny olon-dehibe, ary amin'ny takelaka ho an'ny ankizy. Ny dosie tokana sy ny faharetan'ny fampiharana dia tokony aseho amin'ny dokotera, mifototra amin'ny toetran'ny vatany sy ny endriky ny aretina.
Arbidol dia natao ho fanafody ho an'ny ARVI. Ny vokatra tsara indrindra dia voamarika amin'ny fiantombohan'ny zava-mahadomelina amin'ny andro voalohan'ny aretina. Izany dia noho ny zava-misy fa ny tetikasa arbidol dia mikendry ny fiarovana tsy mbola simba ny sela ao amin'ny vatana. Andeha hojerentsika akaiky ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina.
Ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina, toy ny interferon an'ny olombelona, ​​dia manakana ny fidiran'ny viriosy ho ao amin'ny sela. Ao amin'ny dingana voalohan'ny aretina dia tsy manam-potoana hisakanana ny hery fiarovany ny zavamananaina, ary ny arbidol dia mandrisika ny famokarana interferon. Ny fihetsika ara-pihetseham-po mifanaraka amin'ny fiarovana ny sela amin'ny fametrahana viriosy, dia mahatonga ny arbidol ho mpanohitra mahery ny viriosy. Ny aretina dia mora kokoa sy haingana.
Ampiharo arbitol sy ho an'ny faminaniana. Voatery hisotro amin'ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana izay nahatonga azy ho narary tamin'ny gripa. Maro ny ray aman-dreny manontany tena hoe: Azo omena arbidol ve ny ankizy? Azo atao izany, saingy aorian'ny fahatelo dia telo taona.
Ahoana no atao hoe arbidol amin'ny ankizy?
Takelaka iray misy 50 mg ny vatana mavitrika. Izany arosidia arbidol izay tsara indrindra ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 6 taona. Ny 6 ka hatramin'ny 12 taona dia avo roa heny ny doka. Ny ankizy 12 taona mahery sy ny olon-dehibe dia aseho amin'ny dosage 200 mg ny vatana mavitrika, izay mifanaraka amin'ny takelaka 4 na kapsily 2. Na inona na inona vanim-potoana, arbidol dia raisina amin'ny soritr'aretin'ny aretina voalohany. Amin'ny andro iray dia tokony handray fepetra efatra amin'ny fotoana fohy (6 ora). Ampiasao ny rongony minitra vitsy alohan'ny hisakafo. Raha sendra fitsaboana tsy fahampian-tsakafo dia aza manome zaza dolara arbidol. Izany dia mety hitarika amin'ny vokatry ny fo, ny voa, ny atiny na ny CNS.
Tahaka izay rehetra, na dia ny tsy mampidi-doza indrindra aza, arbidôl dia misy tranga marobe. Ny fitsaboana dia manana fetra voafetra amin'ny vanim-potoana, ny zaza latsaky ny telo taona amin'ny fidirana ny zava-mahadomelina dia voarara ary ho an'ny tanjona ara-pahasalamana sy fisorohana. Tsy afaka mampiasa arbidol ianao mandritra ny fitondrana vohoka sy ny famitahana. Raha manaisotra ny zava-mahadomelina amin'ny kitapony voalohany dia hisy olona manana aretina mahery vaika avy amin'ny ra, ny fo, ny aty na ny voa. Olana ara-toekarena iharan'ny zava-mahadomelina mijaly noho ny tsy fahampian'ny zava-mahadomelina.
Arbidol dia tsy misy fiantraikany miavaka. Ny hany tokana dia fanehoan-kevitra mampihetsi-po amin'ny singa misy ny zava-mahadomelina.
Ao amin'ny pharmaceuticals rosiana maoderina dia tsy misy analoges an'io zava-mahadomelina io. Indraindray dia nosoloana kagocel na anaferon izy, saingy manana fiantraikany amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izy ireo, tsy toy ny arbidol, mifandray amin'ny viriosy. Noho izany, ny fampitahana ny vokatra ara-pahasalamana eo amin'izy samy izy dia tsy marina. Mifidy ny zava-mahadomelina mety ho an'ny zanakao dia tsy ho mpitsabo fotsiny.
Malahelo ilay zaza
Fitsaboana amin'ny vahaolana saline ho an'ny ankizy
Hydrocephalus amin'ny ankizy
Fampidiran-drà amin'ny zaza ao am-bohoka
Ny fofona amin'ny acetone avy amin'ny vava ao amin'ny zaza no antony
Famonoana Pirentel - ahoana no hakana ny ankizy?
Suprastin ho an'ny ankizy
Ny zaza dia manana leokocytes ao amin'ny ra
Catarrhal angina amin'ny ankizy
Famaranana trano hazo ao anatiny - hevitra
Fihetseham-po - ahoana no fomba hifidianana ny tsara indrindra?
Pants Adidas - ireo modely fanatanjahantena sy loko tsara indrindra avy amin'ny marika malaza
Nahoana ianao no tsy afaka mijery ny mason'ny saka?
Kiraro mihaja 5 cm
Sorena eo amin'ny vava - fitsaboana
Fihetseham-batana amin'ny fihenan'ny kibo sy ny bika